Xog Cusub: Madaxweynaha Puntland oo diiday dalabkii musharixiinta - Awdinle Online
Xog Cusub: Madaxweynaha Puntland oo diiday dalabkii musharixiinta
Madaxweyne Maamulka Puntland, ayaa si cad u diiday codsi uga yimid musharrixiin ku shirsan Muqdisho, kuwaas oo ka dalbaday in uu beddelo laba xubnood oo ka tirsan Xafiiskiisa, oo uu ku daray Guddiga Doorashooyinka heer Federaal iyo Guddiga Xallinta Khilaafaadka.
Musharrixiinta ku shirsan Muqdisho, waxay madaxweyne Deni ka dalbadeen, in uu beddelo labada xubnood oo kala ah; Agaasime ku xigeenka Madaxtooyada Puntland Cabdiweli Cali Cabdulle Tima-cadde iyo Yaasmiin Maxamuud Xaamud (Nayn) oo kamid ah Guddiga sare ee La-Talinta Madaxweynaha.
Musharrixiintu waxay Mr. Deni xasuusiyeen, in haddii uu beddelo labadaas xubnood ee ka tirsan Madaxtooyada Puntland, taasi ay cadaadis ku saari doonto Madaxweyne Farmaajo, in uu beddelo xubno ka tirsan Xafiiskiisa, oo uu ku daray Guddiga Doorashooyinka heer Federaal.
Balse, Madaxweyne Deni ayaa gebi ahaanba diiday codsiga uga yimid Musharrixiinta Doorashada 2020/2021, kaas oo ku saabsan in uu beddelo labada xubnood oo kala ah Cabdiweli Tima-cadde iyo Yaasmiin Nayn.
Previous articleAl-Shabaab oo gubay Gaadiid farabadan & dowladda oo ka hadashay
Next articleQM oo ka hadashay duufaanta ku dhufatay deegaano ka tirsan Puntland